Itoobiya oo Joojisay Magangaliyadii ay Siinaysay Qaxootiga Eriteriya – Rasaasa News
Itoobiya oo Joojisay Magangaliyadii ay Siinaysay Qaxootiga Eriteriya
Jijiga, April 24, 2020 – Dawalada Itoobiya ayaa gabi ahaanba joojisay, magangaliyadii ay siinaysay qaxootiga ka soo carara dalka Eriteriya.
Go,aanka ay ku joojisay siinta warqadaha aqoonsiga dadka magangaliyo doonka ah ee ka imanay Eriterianka, ayaa ku bilaabmay qarsoodi bishii January. Ilaa iyo hada dawlada Itoobiya si cad uma shaacin go,aanka ay ku joojisay magangalinta dadka dhibaatadu wado.
Dad badan oo qaxooti ah ayaa ka baxasanaya dalka Eriteria, kuwaas oo soo gali jiray Itoobiya. Dadka cararka ah iyo kuwii sii joogay Itoobiya waxay hada u carayaan dalka Libiya, si ay ugu gudbaan Yurub. Waxaana la sheegayaa in ay haystaan dhibaatooyin xoog leh, gaar ahaan caruurta iyo haweenka.
Hayyada UNHCR, ayaa walaac badan ka muujinaysa talaabooyinka ay qaaday Itoobiya, iyada oo waliba doonaysa in ay xidho xerada qaxootiga ee Hitsats ee deegaanka Tigray, oo ay ku jiraan 10,000 qof.
Raysal wasaare Abiy Ahmed iyo madaxwaynaha Eriteriya ayaa ah saaxiib dhaw ah, kadib kolkii ay ka heshiiyeen colaadii labada dal, iyaga oo si joogta u kulma. Shacabka reer Eritrea ayaa ku dhibaatasan labada dalba sidaas waxaa yidhi Bereket Zemuy, oo gudoomiyaha ardayda Eriteriya ee Jamacada ka dhigtay Itoobiya.
Itoobiya ayaa dhawaan dib waxay ugu celisay dalka Jabuuti nin Baylood ah oo waydiistay magangaliyo siyaasadeed. Saddex xidigle duuliye, Fouad Youssouf Ali, waxaana uu ka mid ahaa ciidanka cirka dalka Jabouti.
Abiy Ahmed, ayaa bilada nabada ku qaatay heshiiska uu la galay Eriteria, waxaana loo diiday bilada in uu la wadaago Kalitaliye Isaias Afwerki.
Abiy Ahmed, wajigii uu ku bilaabay siyaasada furfuran iyo dhabta uu maanta ku dhaqmayaa ay aad u kala duwan yihiin.